ပါကစ္စတန်၌ ရထားနှစ်စင်း တိုက်၊ ခြောက်ဦးထက်မနည်း သေဆုံး၊ ၁၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ ~ RANGON NEWS DAILY
" ချစ်ခြင်းနဲ့နှောင်ဖွဲသံယောဇဉ် .."
၁၅၇ လမ်းရှိ တိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် လေထုအဆိပ်သင့်ရာမှ တ...
"ဘောလခဲ၌ တောင်ကျချောင်းရေ နှင့်အတူ နှမ်းစိုက်တောင်...
ပါကစ္စတန်၌ ရထားနှစ်စင်း တိုက်၊ ခြောက်ဦးထက်မနည်း သေ...
ပါကစ္စတန်၌ ရထားနှစ်စင်း တိုက်၊ ခြောက်ဦးထက်မနည်း သေဆုံး၊ ၁၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
10:42 PM KhinMaung Latt No comments
RangonNewsDaily::Thursday. September 15. 2016
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ပန်ဂျတ်ပြည်နယ်၌ Karachi-bound express ရထားနှင့် ကုန်တင်ရထားတစ်စင်းတို့ ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်) နံနက်ပိုင်းက တိုက်မိခဲ့ရာ ခြောက်ဦးထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ၁၅၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
မူတန်မြို့နှင့် ၁၅ မိုင်ခန့်အကွာတွင် Express ရထားက ဘူတာတွင် ရပ်ထားသည့် ကုန်တင်ရထားကို တိုက်မိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရထားတွဲလေးတွဲ တိမ်းမှောက်သွားခဲ့သည်။ လူ ၁၀ ယောက်မှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကိုလိုနီခေတ် ကတည်းက တည်ဆောက်ထားခဲ့သည့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ရထားလမ်း ကွန်ရက်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာ ကတည်းက ယိုယွင်းမှုများ ရှိနေခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၅ ဇူလိုင်လကလည်း ဆင်း(ဒ်) ပြည်နယ်၌ ဘူတာတွင် ရပ်ထားသည့် ရထားကို အခြားရထားတစ်စင်းက ဝင်တိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူ ၁၃၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
Photo Credit: REUTERS/Khalid Chaudry
Posted by : ကိုလတ် Cool Download Rox | Admin at 10:42 PM